2 veggie stekite steak for hamburgers-ka aad u baahan tahay inaad dhadhamiso - Hagaajinta Caafimaadkaaga - HOOS KA DHAGAYSO
ACCUEIL » rasiidhada »2 veggie stekite steak for hamburgers aad u baahan tahay inaad dhadhamiso - Caafimaadkaaga hagaaji
Burger Veggie waa kala duwanaan ku saabsan hamburgers dhaqameed. Cuntadani waxay si aad ah ugu habboon tahay dadka caafimaad ahaan ama sabab ahaan anshax ahaan aan cunin waxyaabaha asal ahaan ka soo jeeda xoolaha. Taasi waa sababta aan halkan u joogno inaan isku dayno laba nooc oo hamburger vegan steak, oo run ahaantii aad u fiican.
Diyaar garowyadaani waa hab dhakhso ah oo asal ah oo lagu cuno cunnooyinka dhirta badan. Isticmaalka baastada vegan waxa si tartiib tartiib ah u kordhaya adduunka oo dhan sababta oo ah waa ka beddelka kaloori yar oo yar. Waxaa jira, intaas waxaa sii dheer, xad la'aan kaladuwanaansho ah. Halkan waxaan ku siinaynaa laba. Dooro midka ku habboon dhadhankaaga. Abwaanku!
1. Khudaarta cagaaran ee lagu sameeyay quinoa
Caleemaha khudradda laga sameeyay quinoa waxay ku yar yihiin kaloori waxayna ku jiraan nafaqooyin waxtar u leh caafimaadka. Quinoa waa cunno hodan ku ah borotiinka khudradda, fitamiinnada B, C iyo E iyo macdanta muhiimka ah, gaar ahaan birta iyo kaalshiyamka.
Cuntadani way fududahay in la diyaariyo waana ikhtiyaar fiican in la cuno cuntooyinka dhirta badan. Waxaan si gaar ah uga fikirnaa carruurta isagoo leh.
100 g oo ah karooto
30 ml caano khudradeed
1 dhar qoyan
Dhir, dhir iyo oregano
Salt iyo basbaas
Marka hore, dhaq oo ku mayr quinoa, ka dibna u kari karkari digsi ilaa 20 daqiiqo.
U gudub qulqulada goosaar isla markaana gadaal u hay.
Peel basasha, toon ah toon iyo cajiid, ka dib goo khudaartaas julienne.
Ku rid khudradda aad hada ka goysay julienne ee kuleylka ah kuna walaaq ilaa aad ka hesho isku dhafan dhammaystiran. Hadaad rabto, kahor intaadan khudaarta u rogin biliij, waad kari kartaa, laakiin tani daruuri maahan. Intaa waxaa dheer, waxay ku qaadan doontaa waqti dheer.
Ku dar caanaha khudradda, quinoa la kariyey, miraha, cusbada iyo dhir udgoon ee aad dooratay. Si fiican u walaaq.
Hadda waa waqtigii la diiri lahaa, la maydhay oo la kariyey karootada. Walaaq dhexgalka iyo walaaq mar kale.
Ku dar xaddiga rooti-rooti ee aad u malaynayso inay ku habboon tahay. Fikradda ayaa ah in la helo qoraal joogto ah. Isku qas ku hawo qaboojiyaha muddo dhowr saacadood ah si steaks ay u yeelan karaan qaab markii la karinayo.
Sida karinta, waxaad u door bidaa wax dubista ama digsiga. Haddii aad dooratid ikhtiyaarka labaad, ku kari foornadaada foornada digsi kuleyl kulul oo ku qiiji saliid saytuun ah. Ka dib saliidda xad-dhaafka ah ku bixi warqad nuugsan. Haddii aad doorbideyso dubista, dhig steaks saar saxan oo u oggolow inay toban daqiiqo ku kariyaan dhinac kasta 180ºC (kuleylka kor iyo hoos).
Vero-digaaga vegga ayaa diyaar ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad kor u qaaddo xiisahaaga wareega oo waa la ciyaari doonaa. Cunto wanaagsan!
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Cunnada Vegan ee loogu talagalay cayaaraha: waxa loo baahan yahay in la tixgeliyo?
2. Khudaarta cagaaran ee laga sameeyay bariiska
Cuntadani waxaa laga sameeyay waxyaabo aasaasi ah, taasina waa maaddooyinka aan badanaa ku haysano guriga. Waxay ka saari kartaa ganacsiga markii aadan aqoon waxa aad karinayso.
Cuntadani waxay kaa horjoogsaneysaa inaad kufsato iskuday aad ku doorato horeyba loo sii diyaariyey oo la kariyey maalmaha aad u baahan doontaa dhiirrigelin ..
80 g oo ah bariis dhan
1 basbaas cas
Marka hore, diirka iyo jar basasha, karootada iyo toonyada toon marka hore. Dabadeed waxaad dul saartaa digsi aad ku shubtay saliid saytuun ah. Ku kari kuleylka hooseeya illaa shan iyo toban daqiiqo.
Ku dar basbaas hore u shiil oo la jar jaray iyo sidoo kale bariis dhan oo la kariyey. Si wanaagsan isugu qas si aad uhesho isku dar ah iyo dhadhamin.
Waxaa la joogaa waqtigii la samayn lahaa vegan steaks. Markii la dhammeeyo, ku cadaadi galley ama rooti.
Arinta la xiriirta karinta, hadii aad kudaafisay digaagada bur, waxaan kugula talineynaa inaad ku karsato digsi halkii aad ku dubin lahayd foornada. Kululee digsi wanaagsan oo saliid saytuun ah digsi oo kari digaaga vegga hal mar markiiba si heerkulka saliidda uusan u yarayn.
Mar alla markii la kariyo, saar steaks-kaaga sariir daboolan warqad nadiif ah si looga saaro baruurta xad-dhaafka ah.
Istuudiyadaadu waa diyaar! Waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa inaad kor u qaaddaa hibarkaaga oo aad ku raaxaysataa cuntadaada. Cunto wanaagsan!
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Comment u diyaari majones kareemka ah oo ka samaysan macaan
Marka laga hadlayo rootida, waxaan kugula talineynaa inaad iska doorato rootiga hadhuudhka badan ama rootida qamadiga.
Haddii aadan dooneynin inaad kibis cuntid, saladh gantaal oo leh yaanyo, maraqa iniin khardal le'eg ama maraqa wanaagsan ee vinaigrette ayaa ah ikhtiyaar fiican. Kareem khudradeed (zucchini, squash, isbinaajka) ayaa ah mid kale. Iyo macaan, maxaa ka wanaagsan miro wanaagsan! Waxaad hubsan doontaa inaad daboosho baahiyahaaga nafaqada.
Markaad meel wada gaynayso waxyaabaha aad wax ku kaxayso, waxaad ku dari kartaa waxyaabaha soo socda: yaanyada, Maraqa vegan, maraqa pesto, iniin khardal le'eg, jiiska vegan, boqoshaada ama cuntada kale ee aad doorato.
Siyaabaha 3 si ay u sameeyaan siriyeyaasha vegan
Dharka loo yaqaan 'smoothies' khudradda kaliya maahan iskudhafan waxyaabaha "cagaaran" ee lagu xushay si aan kala sooc lahayn. Halkan ka soo hel saddex siyaabood oo smoothies loo sameeyo. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/2-recettes-de-steaks-vegans-pour-hamburgers-que-vous-devez-gouter/